Privy: Mfe iji, Atụmatụ dị ike maka nnweta ahịa Ahịa | Martech Zone
Otu n'ime ndị ahịa anyị na-agbanye Squarespace, usoro njikwa ọdịnaya nke na-enye ihe niile dị mkpa - gụnyere ecommerce. Maka ndị ahịa na-ahụ maka onwe ha, ọ bụ nnukwu ikpo okwu nwere ọtụtụ nhọrọ. Anyị na-akwado ndị ọbịa WordPress ka akwadoro maka ike ya na enweghị mgbanwe ọ bụla… mana maka ụfọdụ Squarespace bụ nhọrọ siri ike.
Ọ bụ ezie na Squarespace enwereghị API na ọtụtụ nde ngwaahịa ndị emepụtara nke dị njikere ịga, ị ka nwere ike ịchọta ụfọdụ ngwaọrụ dị egwu iji bulie saịtị gị. Anyị nwere otu onye ahịa nke na-achọ itinye popups n'ime saịtị ya iji gbaa ndị ọrụ ume ịdenye aha na akwụkwọ akụkọ ya. Anyị chọtara azịza siri ike na Vygwọ ọrụ.
Ihe ndị dị na Privy gụnyere
Dọrọ na dobe Onye Okike - Họrọ site na ụdị ngosi ngosi dị iche iche dị iche iche gụnyere popups, ọkọlọtọ, Ogwe osisi, flyouts, ụdị agbakwunyere, peeji nke ọdịda, ndị na-ebute taabụ, na ibe ekele. Nwere ike ịmepụta ahụmịhe ntụgharị nke dabara na saịtị na akara gị dị ugbu a. Ma ọ bụ ị nwere ike ịmepụta peeji nke ọdịda akwadoro maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ nke a na-akwụ ụgwọ.
Icheta - Ebumnuche dabere na ebumnuche ọpụpụ, ọdịdị ala, uru ụgbọ, ụzọ ntugharị, ụdị ngwaọrụ na ndị ọzọ.
Koodu dere - hazie ma kpughee otu ojiji ma ọ bụ nnukwu coupon Koodu mgbe ịbanye-na. Ọbụna mee ka ndị ọrụ gbapụta onyinye na ekwentị ha mgbe ị na-eleta ụlọ ahịa brik na ngwa agha gị.
Mmekọrịta - Mekọrịta kọntaktị ọhụrụ na ezigbo oge na ịre ahịa email gị, CRM, ecommerce ma ọ bụ ikpo okwu retargeting. Jikọtara ọnụ ndị ọrụ Privy na arụmọrụ gị dị ugbu a na nkwado maka ntinye abụọ, mpaghara ọdịnala, na ngalaba.
Mmekọrịta gụnyere Shopify, Squarespace, Magento, ecwid, Bigcommerce, Weebly, WordPress, Hubspot, Tumblr, Joomla, Zen Cart, Eager, 3dcart, Spacecraft, Mailchimp, ConstantContact, Mailerlite, Emma, ​​Infusionsoft, Drip, ConvertKit, GetResponse, SendinBlue, ActiveCampaign, Mailigen, Soundest, Benchmark, Delivra, Mgbasa OziMonitor, ConvertKit, AWebert, Customer.io, Bizzy, Klaviyo, Drip, Bizzy, Mailup, ininbox, Mad Mimi, dotmailer, Feedblitz, Freshmail, Remarkety, Fishbowl, iLoyal, Slack and Adroll.
Otu esi emejuputa Mgbasa ozi mbu nke mbu
Nke a bụ njem ije 4 nkeji, ebe Privy na-agwa gị okwu site na usoro dị mkpa nke ịmepụta mkpọsa izizi gị.
na Vygwọ ọnụahịa ị nwere ike ịnweta njirimara ngosi saịtị ọ bụla, njikọta, na ụdị ngosi maka otu ọnụahịa! Privy kwadoro ubi maka ndị ahịa niile, n'agbanyeghị agbanyeghị ego iji nweta ngwa ọrụ ntụgharị kachasị mma n'ahịa.
Kedu ihe ị na-enweta? Nke ahụ pụtara nchịkwa ọ bụla ị na-etinye na saịtị, mkpọsa nchekwa nzọ, mkpọsa mgbasa ozi, mkpọsa-mmeri, akara ngosi pụrụ iche, ntinye HTML, mmebe ihe, nyocha A / B, njikọta ozi facebook, ịwụnye mkpụrụedemede omenala, na site na igbe njikọ na ihe ndị ọzọ nke teknụzụ gị. ”
Tags: 3dcartActiveCampaignchieAWebertbenchmarkBigCommerceNa -agbagwoju anyaMgbasa OziNọgide na-emechiConvertKitctaAhịaNdiaguonye ntụpọntapuNa-anụ ọkụ n'obiEcwidEmmaọpụpụ ebumnucheNriAzụOzi ọhụrụGetResponseokpokoroIGIHEMicrosoftigbeJoomlaKlaviyombido peeji nkeMad MimimagentomailchimpMailerliteMailigenNzipu ozigbapụtanzuzoNtughariSendinBlueụlọ ahịaslackKachasị mmaỤgbọelusquarespacetumblrwee jirikwa yaWordPressZen Cart